Iziphi izindawo eziphezulu ze-PR ezingakusiza ukwakha ama-backlink?
Naphezu kokuguqulwa kokuguquguquka kwe-algorithm okuqhubekayo, ama-backlink ahlala ebalulekile kwizinga lewebhu. Kusadingeka ukudala ama-backlink kuma-PR aphezulu ukuthuthukisa isikhundla sakho sewebhusayithi futhi uqinise ubukhona bakho kuwebhu. Manje, i-algorithm yesimo se-Google isebenza ngendlela elula - ephakeme inani le-backlinks yekhwalithi elikhomba isayithi lakho, ikhasi lakho lewebhusayithi elifanele kakhulu.
Noma kunjalo, udinga ama-backlink hhayi kuphela ukuthuthukisa ukuthuthukiswa kwenjini yakho yokusesha. Basiza ukuthuthukisa ukuqwashisa kwe-brand yakho futhi balethe izimoto eziningi zemvelo ezivela kumasayithi ahlobene kakhulu.
Ukuze ube nesiprofayili esihle sokuxhumanisa, akudingeki nje usebenze kanzima ukudala izixhumanisi ezintsha ezifakiwe kusayithi lakho kodwa futhi ukulandelela izixhumanisi ongazisebenzisi ukuzithola nokuqeda lezo zixhumanisi ezingalimaza ibhizinisi lakho.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngokuthi singathola kanjani izindawo eziphezulu ze-PR zokwakha ezenzelwe ukulandela ngemuva. Ngaphezu kwalokho, sizocubungula indlela yokwakha iphrofayli yokuxhumanisa yokuwina futhi sisuse izixhumanisi ezibangelwayo ezilimazayo.
Ungayithola kanjani i-backlink ephezulu ye-PR ephezulu yesayithi lakho?
Udinga ukuqala ngokubuka imithombo yomgwaqo wakho. Konke okudingayo emgqeni wezingqikithi zezixhumanisi ukucinga iwebhu ngamagama angukhiye ahlosiwe bese uqaphela ukuthi yimaphi amawebhusayithi aphezulu kakhulu.
Ukuhlola izingosi eziphezulu zokuncintisana nomncintiswano othile we-market niche, ungasebenzisa i-Semalt Web Analyzer noma ithuluzi elifanayo leWebhu. Uma usufumene umthombo webhovisi ophezulu okhuluma ngokungenayo, udinga ukuzama ukuphindaphinda lezi zixhumanisi bese uthole lo mgwaqo obalulekile kusayithi lakho.
Njengomthetho, ama-backlink amahle avela kumikhiqizo nemikhiqizo eqinisekisiwe noma amasevisi. Yingakho kufanele futhi ugqugquzele ibhizinisi lakho kuma-social media bese uphakamisa inombolo yabathengi kubasebenzisi bakho. Ukusebenzisa isofthiwe ekhethekile ezenziwe ngokuzenzakalelayo, ungabheka okushiwo umkhiqizo wakho kumithombo yezenhlalo bese ushintsha la mazwi ngama-backlinks.
Ngokuvamile, i-backlink isebenza njengezinkampani zewebhu kanye nezinkomba zedumela. Yingakho uma unikeza amakhasimende akho angahle ngemikhiqizo yekhwalithi namasevisi kanye nokuqukethwe okuwusizo, abantu bazokhuluma ngawe futhi baxhumanise nesayithi lakho. Ngenxa yalokho, uzothola okuningi ujusi we-organic link kanye nokubona komkhiqizo omuhle.
Indlela yokuphatha idumela lakho le-intanethi?
Uma ungathanda ukuba nokuhamba kwezimoto njalo futhi udale imikhombandlela, udinga ukuphatha idumela lakho lomkhiqizo we-intanethi. Uma unezibuyekezo ezingalungile mayelana nebhizinisi lakho kuwebhu, faka isikhathi sakho nemizamo ekulungiseni inkinga yakho yekhasimende kunokuzama ukususa le mpendulo engalungile. Udinga ukuphendula kuzo zonke izinkinga zokuphazamiseka okungezona futhi uthole ukuthi yini ehamba kahle. Uma inkinga ivela eceleni kwakho, udinga ukuyithuthukisa futhi unikeze ikhasimende ngesaphulelo esibalulekile noma isinxephezelo.
Njengomthetho, amakhasimende anganeliseki aguqula ingqondo yabo emva kwalokho futhi abuyekeze ukubuyekezwa kwabo, abelane ngalokho okwenzile futhi uguqule isimo esibi sibe ngcono.
Yingakho udinga ukusebenza kanzima ukwanelise amakhasimende esikhundleni sokwakha izixhumanisi. Uma uthembekile ngokwengeziwe kubasebenzisi bakho bekhredithi, izinga eliphezulu le-backlink laphezulu ongayithola Source .